DABAGALKA WARKA: PUNTLANDTIMES oo dabagal ku sameysay ciidamada S/land katirsanaa ee iska dhiibay magaalada Buuhoodle? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
XOG: Madaxweynaha Puntland xaggee ku tagaya safarkii ugu horeeyey oo ka baxsan Caasumada Garoowe, isagoo Madaxweyne ah? 1 min ago
DAAWO:Wasiirka cusub ee Wasaarada Caafimaadka P/land oo xilka kala wareegay wasiirkii hore 19 hours ago
Home 2018 February Wararka Maanta, Warbixino DABAGALKA WARKA: PUNTLANDTIMES oo dabagal ku sameysay ciidamada S/land katirsanaa ee iska dhiibay magaalada Buuhoodle?
DABAGALKA WARKA: PUNTLANDTIMES oo dabagal ku sameysay ciidamada S/land katirsanaa ee iska dhiibay magaalada Buuhoodle?
February 12, 2018 |by W LAASCAANO| 8
BUUHOODLE(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes ayaa shalay baahiyey xog cadeynaysa in ciidamo katirsanaa kuwa Somaliland ay isku dhiibeen Puntland, ayna kasoo goosteen maamulkaas oo ay horey ugu biireen, markii sidda ay sheegeen ay horey daryeel uga waayeen dhinaca maamulka Puntland sannadkii 2010-kii.
Maleeshiyadan oo tirro ahaan lagu sheegay 160 Askari, waxay katirsanayeen ciidamada Somaliland, waxaana si gaar ah ay taageerayaal ugu ahaayeen Saleeban Axmed Xagla-Toosiye oo horey u soo noqday wasiirka Caafimaadka ee maamulka Hargeysa.
Xagla wuxuu maleeshiyadan ku hayey duleedka magaalada Buuhoodle, gaar ahaana deegaanka Carro-weyne oo uu ka soo jeedo siyaasigaas, wuxuuna hadda door biday in ay biiriyaan dhinaca Puntland.
Jahawareerka siyaasadeed ee la rumeysan yahay in ay dadka deegaanadaas galiyaan siyaasiinta oo hadba dhinac aado, waxayna hadda u muuqdaan dhoola-tusyo kale oo siyaasadeed.
Fikrad soo laabashada maleeshiyadan waxaa taageero u muujiyey xubno katirsan golayaasha Puntland, gaar ahaana xubnaha ugu sareeya oo aaminay in ay tanni siin karto fursad kale oo siyaasadeed, gaar ahaana marka laga hadlayo xiisadda Tukaraq oo saameyn kale kuyeelatay maalmihii u dambeeyey.
Booqashadii wasiirka Howlaha guud iyo gaadiidka ee Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ku tagey Buuhoodle ayaa la rumeysan yahay in ay soo dadajisay in maleeshiyadan ay soo galaan dhanka Puntland, wuxuuna wasiirkan oo booqday deegaano kala duwan.
Mr, Qambi ayaa taageero kahelay Buuhoodle, taas oo dhabar jab ku noqotay qaar kamid ah Madaxda Puntland oo ka soo jeeda deegaankaas, una arkay socdaalkaas mid laga lahaa dano siyaasadeed laguna beegay xili xiisado colaadeed ay ka taagan yihiin gobalka Sool.
Xogo kale oo ay heshay Puntlandtimes.com waxay sheegayaan in soo dhiibida maleeshiyadan ay hordhac u noqon karaan Saleeban Axmed Xagla-Toosiye oo mar kale kusoo laabta siyaasadda Puntland.
Isagoo xooga saaraya sidii uu saameyn u yeelan lahaa doorashada 2019-ka, isagoo kal hore tartan u galay jagada Madaxweyne kuxigeenka xiligaas oo laga guuleystay, balse damac cusub ayaa ku jira sida ay sheegayaan warar ku dhaw dhaw, wuxuuna waqtigan ku sugan yahay Somaliland.
Is bed-bedelka siyaasiinta ka soo jeeda gobalada Sool & Cayn ee hadba aadida maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa ka dhigan in aysan wali jirin siyaasad, daganaansho iyo mawqif ay xubnahan qaataan, kuna wajahan xaaladda gobaladaas ay ka sugan yihiin.
8 thoughts on “DABAGALKA WARKA: PUNTLANDTIMES oo dabagal ku sameysay ciidamada S/land katirsanaa ee iska dhiibay magaalada Buuhoodle?”
Mohamad February 12, 2018 at 11:19 am · Edit
Puntlandtimes ka raali ahaada inaan shalay idiin soo qoray idinna ma bahashii baad barateen warkaasuna waa jiraa waana ciidan beesha cali gari ee dhulbahante lkn maaha qaar puntland wax u taraya somalilandna wax yeeli kara ciidanna maahayn ee waa maliishiyo beeleed xaglatoosiye markuu buuhoodle tago ka giijin jiray oo gunno waayay ee ma ahayn ciidan somaliland u diwaan gashan.
Mohamad February 12, 2018 at 11:27 am · Edit
Annagu dad akhyaali kunnool ah ma nihin oo aan waxba marayn wixii jira lama dafiri karo waxaana jirta saxaafad xor ah oo waxa jira mur haka qadhaadhaatee soo bandhiga taasaana harumar lagu gaadhaa laguna saxaa khaladaadka dawladda iyo waxyaabaha ay ka gaabisay si aanay isu dhigan lkn haddii amaan aan jirin iyo buunbuunin lagala daalo dawladda waxba qaban mayso.
Mohamad February 12, 2018 at 11:31 am · Edit
Puntlandtimes halkaa kasii wada wararka xaqiiqada Ku salaysan hana ka caajisina inaad dadka usoo bandhigtaan wixii jira cidna hawga gabbanina, sababtoo ah run baa dadka deeqda MAHADSANIDIN.
Haliye February 12, 2018 at 1:11 pm · Edit
Xaglatoosiye iyo garaad Jaamac Garaad Ismacill waxay Sl utageen cali khaliif dartii waana rag wax gala waxna guda,
Sidaas oo kale axmed karaash waa nin culus ee Gaas baa waxba ogolayn dhulkana in la xoreeyo ma ogola
Mohamad February 12, 2018 at 1:12 pm · Edit
Sida wax u dhaceenna waxay sheegayaan maliishiyadaas oo Ku xaraysnaa duleedka buuhoodle inay u yimaaddeen xildhibaanno puntland ka socda una dhiibeen woxoogaa lacag ah dabadeedna ay dhaheen puntland baanu Ku biirnay kkkkkkk maxay Ku biiraan awalba halkoodii ay joogeen uun bay joogaanee,taliye ciidan oo puntland ahina lama wareegin kkkkkkk marka qolyihii garoowe joogay baa markii waagu Ku baryay caamada waxan Ku khaldaya kkkkkk xildhibaanada loo soo dirayna waa isku reer marka warar baaba sheegaya in xildhibaannadii lagu xidhay buuhoodle dhinaca itoobiya xukunto mar danbena lasii daayay illeen halkaasay kasoo duseenee waxaana lagu wargeliyay liyuu policeka kilidhka kkkkk marka buuhoodle waxay ka tirsantahay gobolka togdheer meel ay puntland usoo martaana ma jirto, dhawaanna waatuu wasiirka hawlaha guud oo deegaanka kasoo jeedaa uu booqday waana la gaadhsiinayaa dawladnimada hana sugi waayina ciidankaa maliishiyada ah oo la qarameeyay kana mid noqda ciidanka Somaliland.
Haliye February 12, 2018 at 1:14 pm · Edit
Ptimes waa been been sii, madaxtooyada ayaa lagu dhex qoraa oo mushahar lagu siiyaa beenta.
Puntlandtimes February 12, 2018 at 3:52 pm · Edit
Mudane, Xalliye Fikradaada Xaq ayaad u leedahay, Puntlandtimes waa shabakad madax banaan, Maanka ku haay
Mohamad February 12, 2018 at 1:19 pm · Edit
ka eeg warkan degellada kale haddaanad rumaysanayn lkn wax macno ah oo sidaa usii weyni kuma jiro waxbana ka beddeli maayo wadciga jira.